Deg-Deg:-Qarax Lagu Bartilmaameedsaday Madaxweynaha Juba-land oo ka dhacay Kismaayo. - Cakaara News
Deg-Deg:-Qarax Lagu Bartilmaameedsaday Madaxweynaha Juba-land oo ka dhacay Kismaayo.
Kismaio(CakaaraNews)Khamiis Sept 12,2013.Waxaa manta lala beegsaday Qarax ismiidaamin ah Baabuur lagu soo xidhay walxaha qarxa mar madaxwaynaha Jubaland Sheekh Axmed madoobe ay ka soo galbiyeen garoonka Diyaaradaha Baabuur badan oo ay saarnaayeen Masuuliyiin sarsare,saraakiisha Ciidamada iyo Ciidanka ilaalada gaarka ah ee Madaxweynaha.
Sida ilo lagu kalsoonyahay sheegayaan ayaa mar ay madaxweynaha Jubaland iyo kolonyada baabuurta galbinaysay ay soo dhex-marayeen Mid ka mida xaafadaha magaalada kismaayo laguna sheegay Farjano uu si kadis ah docda uga galay baabuur lagu soo rakibay walxaha qarxa baabuurkii Madaxweyne Sheekh axmed madoobe saarnaa oo bartilmameed u ahaa gaboodfalka iyo Soomaleegida Qorshaha Qaraxa.
Warka ayaa waxa uu intaa ku darayaa in aynan xisaabta ku sii darsanin Budhcada argagaxisada soo abaabushay falkan Nooca baabuurka uu saarnaa madaxweynaha JL oo ahaa nooca aynan xabadu Karin wallow la sheegayo in 7 Qof oo isugu jira Masuuliyiin,saraakiil ciidan iyo ciidanka ku geeriyoodeen Qaraxan Qorshihiisa la soo maleegay. Xaalada Madaxweynaha Jubaland ayaa aad u fiican wuuna ka badbaaday shirqoolka loo soo maleegay ee lagu doonayay in lagu khaarajiyo,wallow ay jiraan Sarkaal sare oo Ciidanka JL ah oo ku geeriyooday laguna magacaabo Maxamed Deeq maxamuud Heybe.
Afhayeenka Jubbaland C/Naasir Seeraar oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ilaahay ka bad-baadiyay isku-day Ururka Alshabaab ay ku bartilmaameedsadeen dilka Madeaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo maanta dib ugu soo laabtay Magaaladda Kismaayo.
Inkastooy Masiibo lagu bartilmaameedsaday madaxweynaha JL ka dhacday hadana waxaa muuqata in amaanka Wadooyinka magaalada Kismaayo iyo wadada halbawlaha u ah Magaalada ee laga soo galbiyo wufuuda Garoonka aan laga baaraandegin adkaynta amaankeeda. Wixii ka soo kordha Dib kala soco.